Sịlịnda isi, oriri ọtụtụ, Aluminium Die Nkedo Parts - Yongyu
AJM Aluminium sịlịnda isi 03G103351C / 03810335 ...
Taizhou Yongyu Industrial CO., LTD. e guzobere na 1994. companylọ ọrụ ahụ mere ka akụkụ nke aluminom na-arụpụta ihe karịrị 20years. Companylọ ọrụ ugbu a nwere mpaghara owuwu nke mita 43,000 ma were ihe karịrị mmadụ 300. Ọ nwere nnukwu njikwa njikwa na ihe karịrị 80 ndị ọkachamara na ndị ọrụ ntanetị. Companylọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara na-ebunye OE nke na-elekwasị anya na nkedo ike ndọda、obere mgbatị na nkedo ịnwụ. Mmepe、 mgbatị na imepụta ikike nke ụlọ ọrụ na-eduga na otu ụlọ ọrụ. The ụlọ ọrụ bubata a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke elu-nkenke machining na ule akụrụngwa, iji hụ ngwaahịa mma na ọrụ iji nweta OE àgwà chọrọ. N'ihi ya, ọ na-ekepụtara onwe ya uru asọmpi ahịa na-aga n'ihu, yana ngwaahịa ahụ ka enyere n'ụwa niile nke meriri otuto ndị ahịa.
Anyị sales otu gara Automechianika ...
Ndị ahịa anyị bịara Automechianika Shanghai Show na Dec.3th.2019.
Na June 9th.2017, odeakwụkwọ nke Yuhuan munic ...
Na June 9th.2017, odeakwụkwọ nke otu ọchịchị obodo Yuhuan na ndị otu ya rutere YONGYU iji mee nyocha. O kwuru okwu ọma banyere ihe YONGYU nwetara n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ma gbaa onye ọ bụla nọ n'oche na-arụ ọrụ n'ụgbọala na Ọgba tum tum ume ...
Ahịa ụgbọ ala na ahịa US
Dabere na nyocha nke goodcarbadcar, ụgbọ ala ahịa nke ahịa US na May 1st 2020 ọnwụ na 20% karịa otu oge nke afọ gara aga. Lee okpokoro data, ahịa Hyundai na-ere gburugburu 38% karịa afọ gara aga n'otu ọnwa ahụ. Mazda ahịa wa ...